Mpaghara na nke mba na njikarịcha njikarịcha nke ụwa
Satọde, Satọdee 24, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Offọdụ ndị ahịa anyị na-alaghachi azụ mgbe anyị kwuru okwu njikarịcha ọchụchọ mpaghara. Ebe ọ bụ na a maara ha dị ka ụlọ ọrụ mba ma ọ bụ mba, ha kwenyere na njikarịcha ọchụchọ mpaghara ga-emebi azụmahịa ha karịa inye aka. Nke ahụ abụghị ikpe ma ọlị. N'ezie, ọrụ anyị ebutela nsonaazụ dị iche. Imeri nsonaazụ ọchụchọ mpaghara nwere ike imeziwanye ohere ị nwere ịbụ nke mba ma ọ bụ nke ụwa.
DK New Media na-arụ ọrụ na ndị ahịa ụwa. Anyị nwere ndị ahịa na New Zealand, UK na France. Agbanyeghị, anyị nwekwara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa ebe a na Indianapolis. Anyị nwekwara nnukwu ndị enyi ebe a na Indianapolis. Nsonaazụ bụ na enwere mkparịta ụka oge niile n'ịntanetị banyere ihe anyị na - eme - yabụ na anyị nwere ọtụtụ nlebara anya na ikike dị ukwuu na igwe nchọta na usoro mpaghara.
Anyị na-abụghị nanị kachasị okwu dị ka Indianapolis, anyị na-akwado ihe omume mpaghara, anyị nwere adreesị anyị na peeji nke ibe ọ bụla, anyị nwere profaịlụ azụmahịa siri ike na Google… niile dị na mpaghara anyị. Nke ahụ egbochighị anyị ịchịkwa nsonaazụ ọchụchọ mba na mba niile!
Nke bụ eziokwu bụ na imeri ọchụchọ mpaghara wuru ikike nke ngalaba anyị wee duga anyị na-eto eto na usoro ọchụchọ na-abụghị ala. Anyị nọ n'ụzọ nke ọma iji merie ọtụtụ nsonaazụ ọchụchọ maka SEO metụtara, mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ metụtara okwu asọmpi… njikarịcha mpaghara anyị emerụghị anyị ahụ.
Kama ileghara nchọpụta mpaghara anya, m ga-achọ ịwakpo Ọzọ mpaghara ala - dịka Chicago, Louisville, Columbus, Cleveland na Detroit! Ọ bụrụ na anyị ewere ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, anyị ga-arụ ọrụ na ịnweta ọfịs ha na-emeri ọchụchọ mpaghara mpaghara. Maka ndị ahịa anyị nwere ọfịs mpaghara, anyị na ha rụkọrọ ọrụ iji kesaa obere akwụkwọ na subdomains ndị agbadoro mpaghara ọ bụla. Ọ bụrụ na ha nwere ọnụnọ mpaghara dị mma, ọ ga-enyere ọkwa mpaghara ha aka.
Ma ọ bụrụ na ha na ranking ogo obodo loc nabatara umu okwu iji na-adọta mba ma ọ bụ mba azụmahịa dị n'akụkụ ya!
Sep 28, 2011 na 9: 38 AM
Chọcha maka nchọta mpaghara apụtaghị na ị gaghị enwe ike ịsọ mpi na ọkwa mba ma ọ bụ mba. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ọtụtụ azụmaahịa na-ala azụ ọbụna dejupụta profaịlụ mpaghara, na-eche na nke ahụ pụtara na a ga-enye ha nduru. Enwere ike, ma kwado ya, iji bulie ụfọdụ peeji maka nchọta mpaghara na nke mba iji dọta ndị na-ege ntị.